Misoro yeNhau, 27 Nyamavhuvhu 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Nyamavhuvhu 27, 2019
Dare repamusoro soro remuBulawayo rinoendesa mberi kunzwikwa kwechikumbiro chaIshe Felix Nhlanhlayamangwe Ndiweni chekuti vabhadhare mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo.
Nyamavhuvhu 22, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Nyamavhuvhu 22, 2019
Vanorwira kodzero dzevanhu voshushikana zvichitevera kupambwa nekutochwa kuri kuitwa vanhu vanofungidzirwa kuti vanopikisa hurumende, pamwe nevarwira kodzero dzevanhu asi pasina anosungwa nemapurisa.
Nyamavhuvhu 21, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Nyamavhuvhu 21, 2019.
Nyamavhuvhu 20, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Nyamavhuvhu 20, 2019
Mapurisa anoshandisa zvakare mutemo wePublic Order and Security Act mukutadzisa bato reMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa kuti rienderere mberi nekuratidzira kwaro, muguta reGweru.
Nyamavhuvhu 19, 2019
Misoro yenhau, Muvhuro, Nyamavhuvhu 19, 2019
Mapurisa, mauto nevasori vanonzi vaswera vachitenderera muBulawayo nhasi mushure mekunge MDC yazivisa kuti inoda kuratidzira asi ikamiswa nemapurisa ichibva yakwira kudare kunopikisa.
Nyamavhuvhu 16, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Nyamavhuvhu 16, 2019
Mapurisa anoshandisa mutemo wePublic Order and Security Act mukutadzisa MDC kuti ienderere mberi nekuratidzira kwayo, izvo zviri kupikiswa nehutungamiri hweMDC uhwo hwazopedzisira hwavazivisa veruzhinji kuti vagare kudzimba dzavo.
Nyamavhuvhu 15, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Nyamavhuvhu 15, 2019
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kushushikana zvikuru nekusachengetedzwa kwekodzero dzevanhu zvichitevera kupambwa kunonzi kwakaitwa vanhu vatanhatu pamberi pekuratidzira kuri kuda kuitwa mangwana neMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa.
Nyamavhuvhu 14, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Nyamavhuvhu 14, 2019
Bato reMDC rinoti riri kuenderera mberi nekuratidzira musi weChishanu richiti vanhu vose vakasungunuka kubatana naro.
Nyamavhuvhu 13, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Nyamavhuvhu 13, 2019
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanorumbidza mauto avo vachiti ari kuita basa rakakosha zvikuru mukuona kuti munyika magara muine runyararo. VaMnangagwa vakurudzirawo veruzhinji kuti vasaite zvemhirizhonga kana kuita zvinhu zvinokonzera kusagadzikana munyika.
Nyamavhuvhu 12, 2019
FC Platinum neTraingle Dzosimudza Mureza weZimbabwe muAfrica
Chikwata cheTriangle chakashura mare nezuro mumakwikwi eCAF Confederation Cup mushure mekudambura chikwata cheRukinzo chekuBurundi.
Nyamavhuvhu 09, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Nyamavhuvhu 09, 2019
Sangano reAfrican Diaspora Forum rinoti riri kuronga kuendesa hurumende yeSouth Africa zvichitevera danho rakatorwa nehurumende iyi rekusunga zvizvarwa zvisiri zvenyika iyi, izvo zvinosanganisira zveZimbabwe, richiti South Africa haina kutevedza zvinodiwa pamutemo.
Nyamavhuvhu 08, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Nyamavhuvhu 08, 2019
Zvisineyi nekusungiswa kwakaitwa gurukota rezvekushanyirwa kwenyika, Amai Prisca Mupfumira, neZimbabwe Anti Corruption Commission mwedzi wapera, vanhu vakawanda munyika vanoti komisheni iyi haina zvikwanisiro zvekuti irwise huori hwatekeshera nenyika yose.
WHO Inoti Zimbabwe Yakagadzirira Kudzivirira Chirwere cheCorona Virus
Musangano weTNF Wotanga Svondo Rinouya
VaLovemore Matombo Votarisirwa Kuvigwa kuNyanga neChitatu
Vakambotungamira Sangano reVashandi reZCTU, VaMatombo, Vanoshaya
Muchirongwa 'Dzechitendero' Tine Hurukuro naMufundisi Samuel Lufiyele